Kusocoto maqaaladii Abuu ciisa tarmadi iyo Zahra
Jawaab: Kusocoto maqaaladii Abuu ciisa tarmadi iyo Zahra
ASALAAMU CALAYKUM WARAXMATULAAHI WABARAKAATU
dhamaan walaalayaal salaan kadib waxan filayaa in walaalkeen abuu ciisa tarmadi uu ka hadlay maqaal ay qortay walaasheen Zahra oo ku saabsanaa ma ilaawi karnaa waxii shalay dhacay.
waxan filayaa sida aniga ay aragtidayda ila tahay qaabka ay maqaalka u qortay walasheen Zahra iyo qaabka uu u fasirtay walaalkeen ciise in farqi wayn uu u dhaxeeyo.
abuu ciisaa waxa aad ka hadashay laba qodob oo ay ka hadashay Zahro oo aad ku dhaliishay hadii aysan ka noqona aad ku tilmaamtay inay ku jirto danbi ilaahayna ay u noqoto. dhowr qodob oo ahaa .1. qabyaalada 2. dhaxalka 3. gudniinka mida qabyaalada hadii aan ka hadlo, waxay sheegtay walasaheen zahro in dhibaatada soomaaliya ka jirta ay sababa leedahay, sababtaasna ay ugu horayso qabiilka, waxan filayaa figradaas inay sax tahay oo qabiilka uu yahay mushkilada soomaalida maanta kala gaysay, qofka soomaliya joogana uu wax ku yahay hadba qabiilka uu ka dhashay.
haduu qabiil wayn ka dhashay waa qof sharaf ku leh qabiilkaas wayn oo uu ka dhashay haduu qabiil yar ka dhashay si kastoo aqoon uu u leeyahay waxuu ku shafar beelayaa qabiilkaas yar oo uu ka dhashay, arimaha bulshada wax kaalin ah kuma lahan maadaama qabiilkiisa uu yaryahay, siyaasada, dhaqaalaha iyo horumarka dalkana miisaan kuma yeelanayo haduusan qabiilkiisa miisaan laheen, sidaa daraadeed walaasheen Zahro wwaxay tilmaamaysay kana hadlaysay mushkiladaa wadanka a jirta ee ku salaysan qabyaalada hadii aan laga bixin inaanan wax horumar ah lagaarayn. waxayna tiri ((Waxaa ugu horreeya xalka waddankeena in aanu marka hore erayga qabiil la isku raaco in uu yahay eray af lagaado ah ama erey la isku caayo)).
hadalkaas oo macnihiisa aan ka fahmayno iyo qabiilka soomaaliya ka jiro ee sida xun u shaqeeyo in maskaxdeena aan kasaarno, oo aan noqono dad muslimin ah ilaahay dartiina u walaaloobay qabiilna aan isku kala saaraynin. waxaana filayaa in figradaas hadii sida ay tahay loo qaato ay tahay figrad wanaagsan umadana dan iyo maslaxad ugu jirto, laakiinse taasi macnaheeda maahan in nasabkii labaa bi'iyo, oo qofka nasligiisa aan la aqoonin, macnaha loo baahan yahay inaan ka fahanana waxa weeye in qofka soomaaliga ah uusan qabiil wax ku raadin ama wax ku noqon ee uu wax ku raadiyaa sooomalinimo iyo aqoontiisa/xirfadiisa. marka labada arin isma diidayaan Zahro iyo abuu ciise, hadalkuna isku meel buu u socdaa. qodobka labaad ee ahaa in raga iyo dumarka ay isku midyihiin, walaalkeen ciise waxuu ku tilmaamay in hadalkaas uu meel ka dhac ku yahay Alle xigmadiisa.
waxan filayaa sida diinteena ay inoo sheegtay majiraan wax kala sareen ah oo raga iyo dumarka u dhaxayso, taasina waxaa daliil u ah. 1. xaga cibaadada iyo caabudida ilaahay waa u siman yihiiin, oo gabadha 5 wakhti inay tukato ayaa laga rabaa ragana sidoo kale 5 wakhti inay tukadaan ayaa laga rabaa. 2. ninkii danbaaba ilaahay waa uu ka abaal marinayaa, dumarkana sidoo kale ayuu ilaahay uga abaal marinayaa. 3. xaga zakada raga iyo haweenka isku zakaa laga rabaa oo lama kala fadilin. 4. xaga waxbarshada inay wax wada bartaan islaamka waa uu faray oo rasuulka waxuu yiri SCW( cilmiga oo laraadiyo waajib bay ku tahay qofkaste oo muslim iyo muslimad ah) ama sida uu yiri rasuulka SCW.
waxaase jira waxyaabo ay ku kala duwan yihiin xaga abuurista, taasina waa wax ilaahay uu ugu talagalay oo xigmadiisa ku dhisan, waxaana jira waxyaabo badan oo ragu ay ku fiican yihiin inay qabtaan iyo waxyaabo badan oo aysan awood u laheen inay qabtaan ama ay dhibayso dumarkse ilaahay u fududeeyay sida kala lamid. ragu waxaa la hubaa in shaqada guriga dibadiisa ay uga fiican yihiin haweenka, haweenkana waxaa lahubaa in raga ay uga fiican yihiiin shaqada guriga, taasina waa abuuris ilaahay oo ninka inuu todobaad ciyaal hayo waxaa uga fiican inuu bir wado tareen ka shaqeeyo. dumarkana inay maalin ka shaqeeyaan wado tareen oo la dhisayo waxaa uga fiican inay bil guriga kashaqeeyaan, taasina waa xigmada ilaahay ayaa ku dhisan. su'aasha meesha ka dhalanayso ayaa waxay tahay kala duwnaanshahaas ma keenayaa in layiraahdo raga dumarka way kasareeyaan? waxan filayaa xigmada ilaahay ee kala sareenta waxay ku dhisan tahay waa cibaadadiisa ee maahan jinsi ama midab ama nooc, ilaahayna waxuu quraankiisa ku yiri ( ilaahay agtiisa waxaa idinku karaamo badan kan idinku cabsi badan). sidaa daraadeed wax la yiraahdo kala sareen haweenka iyo dumarka inay jiraan islaamku maqabo, waxuuse islaamku qabaa in xaga howsha iyo abuuristaba ay raga iyo dumarka ku kala duwan yihiin.
inbadana waxaa dalka ka dhacdo in la yiraahdo anigoo 100 ah maxay ii sheegasaa qof 50 ah, taasoo runtii ah danbi wayn oo ilaahay adoomadiis laga galayo, kibir iyo isla wayni uu ilaahay reebayna lagu kacayo, Rasuulka SCW oo wax ka fadli badan uusan jirin ayaa heshiiskii Sulxul Xudaybiya markii ay saxaabadii ka gaabsadeen amarkii rasuulka SCW ee ahaa in tinta laxiirto xoolaha la qowraco, Rasuulka SCW isagoo caraysan markii uu guriga soo galay qofkii lataliyay ee yiri Rasuulka Allow adiga u bilow oo tinta xiiro neefkana qowrac, waatii uu rasuulsa SCW sidii yeelay oo tinta qoystay oo nin saxibay u yeertay oo looxiiray , Saxaabadiina markay arkeen ayay wada sameeyeen sidii rasuulka uu faray, taladaasna waxaa rasuulka siiyay xaaskiisa. marka qaabka ay soomaalida u isticmaasho boqolay iyo kontonley waa qaabkii uu islaamka nahyay, qof laga yaabo xag cibaado iyo xaq akhlaaq iyo xag dhaqanba ku liito ayaa oranayo kontonlay maxay ii sheegaysaa,
marka walaasheen Zahro liidida dumarka ayay ka hadashay waana wax islaamka uu nahyay qofkii yasana uu yahay qof ilaahay adoomadiis ku xadgudbay, sidaa daraadeed wax islaamka iyo diinta meel ka dhac ku ah aniga igama muuqdaan, waxayna ka hadashay walaasheen waxa dhabta ah ee soomaliya ka jiro iyo sida looga bixi karo.
3. gudniinka waxaan filayaa waxa soomaaliya ka socdo laguma tilmaami karo gudniin ee waa dhabargoyn xunbaha taranka ee haweenka, khitaanka rasuulka sheegayna waa kan raga, ee kan haweenka waxaa lasheegaa culimaduna qabtaa hadii marka ay dhalato cirbad yar sidaa looga dhiijiyo oo dhiig yar ka yimaado in ay gabadhu gudan tahay, marka xiriir ka dhaxeeyo gudniinka gabadha iyo xadiiska rasuulka majiro, mana haboono in aragtida saxda ah iyo diinta in la iska horkeeno, maxaa yeelay diinta waxay ku dhisan tahay maslaxada dadka ee kama hortimaado. soomaaliya waxa ka socdo ee haweenka lagu sameeyana waa wax qofkii gaystay maalinta qiyaamo lawaydiin doono, ilaahayna kula xisaabtami doono, sababtoo ah qof yar oo ilaahay amaano kaaga dhigay in aad xubnihiisa iyo dareenkiisa aad sakiin ku goo goyso maahan wax shareecada qabto, in qof kirkiisa isagoo nool lagoo gooyana waa wax qiyaamaha la is waydiinayo, sidaa daraadeed gudniinka raga wax ka hadlayo majiraan maxaa yeelay waa wax la isku waafaqsan yahay arintiisuna ay diinta ku cadahay. dumarkse gudniinka laguda waxaaba layiraahdaa gudniinka fircooniga waana wax laga soo gaaray dhaqankii fircoon ee maahan wax ay diinta shaqo ku leedahay.
arinta Isimada ku saabsan xoogaa waxan filayaa in ay Zahro ka eegtay dhanka dhibaatooyinka, waxaase jira isimo badan oo wanaaga umada ka shaqeeyo, isimaduna maahan wax dhib leh hadii dhanka wanaagsan loo adeegsado. isku soo duuboo Qabyaalada, Liidida Haweenka iyo gudniinka fircooniga waa mushkilado ka mid ah mushkiladaha soomaliya ka jiro dagaalada, furniinka iyo xadgudubyada dalka ka dhacayana iyagaa asal u ah marka in laga waantoobo waa wax qofkaste oo muslim ah laga doonayo.
waxii aan gafay waa shaydaan xagiisa, waxii aan saxayna ilaahay baa igu aadiyay.
waxii talo iyo tusaale ah igu soo dira